Rikoooo.com - Boeing 737-800 Jet2.com ndakọrịta 64-bit FSX & P3D package
Boeing 737-800 Jet2.com ndakọrịta 64-bit FSX & P3D package
Jikọtara: Abụọ 27 Feb 2018, 08:11
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Papy24 » 04 Mar 2018, 11:18 am
Ọ bụ ngwugwu a
Ihe ngwungwu a dakọtara P3D V4?
Ana m ajụ ajụjụ a n'ihi na enwere m nsogbu na Boeing 737 Classic Multi Livery Pack FSX & P3D ....
N'ezie, mgbe ịtọsịrị ya, ọ na -emepụta njehie gosipụtara site na mmechi P3D. Na kọrọ na a log faịlụ "ObjectLoadErrors.FLT". Akwụsịrị m ya, ugbu a achọrọ m ịma ma modulu a kpọtụrụ aha na ihe ahụ dakọtara.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by DRCW » 06 Mar 2018, 04:54 am
Ka ntụgharị ahụ na-aga n'ihu, lelee nkọwa ahụ na saịtị ahụ tupu nbudata. Ọ bụrụ na o kwuru na 100% dakọtara na V4 mgbe ahụ ọ ga - arụ ọrụ ọfụma, naanị ihe nwere ike ịbụ okwu bụ ụda oku ụda dị mma. Ihe kpatara ya bu dll dochie anya xml maka ụdị 64. Ọ bụrụ na nkọwa ahụ gụrụ P3D 3 / 4 ka anwale, mgbe ahụ ọ pụtara na nke ahụ. Igwe ọkụ dị omimi anaghị arụ ọrụ maka ihe ọ bụla na-abụghị n'efu ka ọ dị ugbu a, yabụ gbanyụọ njirimara ahụ, mgbe ọ na-efe ụgbọelu na-anaghị akwụ ụgwọ. Ama m na oge ga-emecha nwe mmezi. Achọpụtala m na ụgbọ elu na-arụ ọrụ n'ime P3D V 3.4 yiri ka ọ na-ebugharị site na iji ego ole na-akwụ ụgwọ